အမှန်သင် ၊ အမှန်ပြင်၊ အမှန်နေ . . . | FOX Sports Myanmar
အမှန်သင် ၊ အမှန်ပြင်၊ အမှန်နေ . . .
ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့တုန်းက စာရေးနေရင်း(ကွန်ပျူတာနဲ့ရေးတာပါ) ၀င်လာတဲ့ အတွေးသစ်လေးကိုမှတ်ထားဖို့ ဘေးနား ၀န်းကျင်မှာမှတ်စရာဘောပင်နဲ့ စာရွက်ကိုရှာတာမတွေ့တာနဲ့ သားတော်မောင် (၇)တန်းကျောင်းသားလွယ်အိတ် ကို မွှေနှောက်တော့ ဘောပင်တင်မကဘူး ဒီကောင့်ကို ချပေးထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေထဲက တစ်ခုကို ဖောက်ထားတာ လက်ပူးလက်ကြပ်မိပါလေရော။ ဖုန်းပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဖုန်းကို ကျောင်းမယူသွားဖို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားပြီး အဲဒါကိုဖောက်ဖျက်ရင် ဖုန်း(၁)ပတ်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ၀မ်နင်ပေးထားတာပါ။ အခုတော့ သူကကျူရှင်သွားနေပြီးကျောင်း လွယ်အိတ်ထဲမှာ ဖုန်းကိုတွေ့တော့ ဒီကောင်တော့နာပြီဆိုပြီး ပြုံးမိတယ်။
ကျူရှင်ကပြန်လာတော့ သူ့ကိုခေါ်မေးတာမှာ အလွယ်တကူပဲဝန်ခံပြီး အလွယ်တကူပဲဖုန်းအပ်သွားတယ်။ ဇနီးဖြစ်တဲ့လူ ပြန်လာမှပဲ သားလုပ်တဲ့ကောင် ကိုယ့်ကို ၂ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်သွားတာသိရတယ်။ တနလာင်္နေ့စာမေးပွဲရှိလို့ အဲဒီနေ့ညမှာ စာမေးပွဲတွင်းတစ်ပတ်လုံးဖုန်းမသုံးရ အမိန့်ထုတ်ပြီးသိမ်းထားဖို့ပြောထားတယ်တဲ့၊ ကောင်းရော. . . ။ ကျွန်တော် တွေးပြီးပြုံးဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုးဆိုတာ ကိုယ်တွေ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကလည်း မကြာခဏ ဘတ်ဖူးတာပေါ့။ ဒါကြောင့် လည်းသူ့ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာ ရိုက်နှက်ဆူဆဲပြီးဆုံးမတာမျိုးထက် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြောပြပြီး ဆုပေးဒဏ်ပေးပုံစံမျိုးကို ကျွန်တော် ကျင့်သုံးတာပါ။ အဲဒီအဖြစ်မှာပြောချင်တာက ကျွန်တော့်သားဟာ “သူကျခံရမယ့် အပြစ်ဒဏ်က သူ့အတွက် ဘာမှ အကျိုးမယုတ်စေဘူး” ဆိုတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အပြစ်တစ်ခုလုပ်သွားတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် စဉ်းစားရတာ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတယ်။ Give and Take ဆိုတဲ့ တစ်ခုလိုချင် တစ်ခုပေးဆပ်ရတဲ့ သီအိုရီဟာ နေရာတိုင်းအတွက်မှန်ရဲ့လား။ လောလောဆယ် တဒင်္ဂမှာ ရလဒ်အားဖြင့်သူ့အတွက် အကျိုးအမြတ်ရှိတာတော့ လက်တွေ့ဖြစ်ပြီး ရေရှည်မှာ သူ့အတွက် အကျိုး ယုတ်စေမယ့် အရာတွေ သူမမြင်ဘူး။ ဒါကိုသူ့ကို သေချာရှင်းပြရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးရခဲ့ပါတယ် . . .။
လွန်ခဲ့တဲ့ (၄-၅)နှစ်လောက်က မြို့ထဲသွားစရာရှိလို့ ကျွန်တော်နေတဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်ကနေ မြို့ထဲသွားတဲ့လိုင်းကားဂိတ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကားကြပ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘဲ လမ်းပေါ်မှာ ကားတွေ အများကြီးဖြစ်နေသလို မှတ်တိုင်မှာလဲ လူတွေကတပုံ တပင်။ ဒါဟာ မူမမှန်တဲ့အခြေအနေဆိုတာသိတော့ မှတ်တိုင်နားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုခြေဦးလှည့်ပြီး ခဏထိုင်ရင်း အခြေအနေကို မေးမြန်းကြည့်တယ်။ အောက်ဖက် ကမ်းနားလမ်းမှာ ကွန်တိန်နာတွေ ဆန္ဒပြတာကြောင့် အောက်လမ်း ကကား တွေအပေါ်တက်လာပြီး လိုင်းကားတွေလည်း တိုးမပေါက်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် မြို့ထဲကို အချိန်မီမရောက်ဖို့သေချာသလို အပူရှိန်ကလည်း မြင့်နေတာကြောင့်လူပင်ပန်းတာကလည်း နှစ်ဆလောက်ဖြစ်သွား မယ်။ သွားရမယ့်ကိစ္စကလည်း မသွားမဖြစ်မဟုတ်တော့ (ဆရာအကြည်တော်ပြောသလို) “မနက်ဖြန်ရွှေ့လို့ရတဲ့အလုပ် ဒီနေ့မလုပ်ပါနဲ့ ”ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လက်ကိုင်ပြီး မသွားတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာပြီး ဆန္ဒပြတဲ့ ကိစ္စကို ဆက်စပ်စုတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ “ဒဏ်ကြေးတွေ တိုးရိုက်လို့ ဆန္ဒပြတာ” ဆိုပဲ။ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ။ ဒဏ်ကြေးဆိုတာ ဈေးကောက်ကောက်သလို မဖြစ်မနေပေးရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်က စည်းကမ်း ကိုချိုးဖောက်မှ ဆောင်ရတာပါ။ တိုးလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ကစည်းကမ်းမဖောက်ဘူးဆိုရင်ပေးစရာမှမလိုတာ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံက ပုံမှန်ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီး စည်းကမ်းဖောက်နေတာ ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲ။ တော်တော်စိတ်ရှုပ်သွားတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေက မသိတာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲ။
စနေနေ့ညနေက ဘောလုံးပွဲကို TV ကကြည့်ရင်း ပထမပိုင်းပြီးနားတော့ Facebook ပေါ်မှာ ဟိုအသံဒီအသံနားစွင့် နေတုန်း ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြည့်ရပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ နည်းပြလို့ထင်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဒိုင်လူကြီးကို လက်သီးနဲ့ လိုက်ထိုးတဲ့ ဗွီဒီယိုပါ။ ညာဖက်အပေါ်ထောင့်မှာ MNL တံဆိပ်တွေ့ရလို့ ပြည်တွင်းကလူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်ပုံရတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီအသင်းမှာကစားနေတဲ့ ကစားသမားတွေအတွက်ပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်က ဘာတွေဖြစ်လဲ ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပေမယ့် နောက်ပိုင်းပြဿနာတွေတက်ရင် ကစားသမားတွေက နည်းပြဖက်ပဲရပ်ပေးကြမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့နည်းပြက ဒိုင်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ ဒီပွဲမှာ ဒိုင်က မမျှတဘူးဆိုတဲ့ အနေအထား၊ ကစားသမားတွေ ကွင်းထဲမှာနစ်နာတယ်ယူဆလို့ နည်းပြက ဒိုင်ကိုစောဒကတက်ရင်း ဒေါသမထိန်းနိုင်ဘဲ တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံမြင်ရလို့ပါပဲ။ ဒီလိုတိုက် ခိုက်တာ သူတို့နည်းပြတရားမျှတမှုအတွက် လို့ယူဆကြမှာပါ။
တကယ်တော့ တရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေ အချင်းချင်းပဲသိကြမှာပါ။ ကိုယ်က ဒီအပိုင်းပဲဖြတ်ကြည့်ရ တော့ အကြောင်းရင်းကိုမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဒိုင်လူကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတဲ့ နည်းပြက သေချာပေါက် အပြစ်ရှိ သွားပါပြီ။ နားရှုပ်သွားလားမသိဘူး။ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းမှာ တရားတာ မတရားတာ ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ုဖြစ်စဉ်မှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တဲ့သူကတော့ အထူးသဖြင့် ဒီပွဲကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်တာက အပြစ်အကြီးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းမှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကစားသမားတွေ သိကြမှာမဟုတ်ဘဲ သူတို့နည်းပြဖက်ကပဲတွေးကြမှာပါ။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးခဲတဲ့ အကြောင်းအရာသုံးခုပေါ်မူတည်ပြီး ကောက်ချက်တစ်ခုရပါတယ်။ ဆရာ ဒါမှမဟုတ် စီနီယာ တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက နောက်လူတွေကို အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေ လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်လက်ဆင့်ကမ်းမှုက မှန်ကန်လား၊ မှားနေလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်သေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း နောက်လူ တွေက မှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အမှန်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ရင်း အချိန်ကြာတော့အမှားနဲ့အမှန်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အားကစားဆိုတဲ့ အရာက စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်သန်မာမှုအပေါ်မူတည်ပြီး တိုးတက်မှုဆုတ်ယုတ် မှုတွေကိုပြဌာန်းပါတယ်။ အလွယ်နားလည်ဖို့ဥပမာတစ်ခုပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘောလုံးကစားတဲ့အခါမှာ “နောက်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်က လူချတတ်ရတယ်” ဆိုတဲ့အယူအဆမှားကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ လူချတယ်ဆိုတာ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ပြစ်ဒဏ်ဘောကန်ခွင့်ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလူမချရင် ဂိုးပေးရမယ် ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာ အသင်းရလဒ်က ကိုယ်ခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်ထက်အရေးပိုကြီးနေတာကြောင့် ပင်နယ်တီပေးပြီးလူချတာတို့ အနီအထိခံပြီးလူချတာတို့အတွက် အသင်းဖော်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေက ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တဲ့သူကို ၀ိုင်းချီးကျုးအားပေးတာပေါ့။ အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်ကြာလာတော့ လူချတာက နောက်တန်းတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးလိုလို ဖြစ်လာ တဲ့အထိ အကျင့်ပါလာကြတာပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင် လူမချဘဲ ဘောလုံးဖျက်တာကိုထူးချွန်တဲ့ခံစစ်သမားတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးစကစားတဲ့အချိန်လောက်ကတည်းက စီနီယာတွေက နောက်တန်းဆို လူချရမယ် ဆိုတဲ့အတွေးမှားတွေ သွန်သင်တာခံလာကြရပြီး နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေက လူမချရင် ဘောလုံးမလုနိုင်တဲ့အထိ ဖျက်ထုတ်မှု အခြေခံတွေ အားနည်းလာတာ အားလုံးအမြင်ပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရမ်းမြင့်မားတဲ့နေရာမှာရှိပါ တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူတိုင်းက ဆရာလို့အခေါ်ခံရရင် ကျေနပ်နေကြ သဘောကျနေကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာတစ် ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်၊ ဖြောင့်မတ်မှု၊ သမာဓိနဲ့ မှန်ကန်တဲ့အရည်အသွေးပိုင်း ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံး ကမသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာများပါတယ်။ ဘောလုံးမှ၊ အားကစားမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအတတ်ပညာမဆို နောက်မျိုး ဆက်က ရှေ့ကမျိုးဆက်ထက် ပိုမိုထူးချွန်မှ တိုးတက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်သိထားတဲအသိကမှားတယ်မှန်တယ်မသိ သလို လေ့လာဖို့လည်းမလုပ်ဘဲ အတွေးမှား၊ အပြုမူမှားတတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းမိတဲအခါမှာ တိုးတက်မှုထက် ဆုတ်ယုတ်မှု ဆီကိုပဲ ဦးတည်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ဟိုတစ်ရက်က “အကုန်သိမီဒီယာ” ကလုပ်တဲ့ ဘောလုံးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးပွဲကြည့်ရင်း လိုအပ်တာတွေက ထင်တာထက်များနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသက်ရှုကြပ်မိတယ်။ နောက်ပြီး အတွေး တစ်ခုလည်းရခဲတယ် “ကမ္ဘာမှာ ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင် အားလုံးက နောက်ကနေ ရှေ့ကိုသွားနေကြတယ်။ ရှေ့ကနေ နောက်ကို ပြန်ရွေ့တာ ငါတို့တစ်နိုင်ငံတည်းလား” ဆိုတဲ့အတွေးလေးပါပဲ။ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ဘယ်သူမဆို အတွေးကောင်း အမြင်ကောင်းလေးတစ်ခုရမယ်ထင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့အရာတွေ နောက်မျိုးဆက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းဖို့လည်း မျှော်လင့်မိ ပါတယ်။
Home Football Team Myanmar အမှန်သင် ၊ အမှန်ပြင်၊ အမှန်နေ . . .